Yintoni intsingiselo yobomi?
Yintoni intsingiselo yobomi?
Umbuzo: Yintoni intsingiselo yobomi?
Impendulo: Yintoni intsingiselo yobomi? Ndingayifumana njani injongo, inkoliseko ebomini? Ndiyakubanakho na ukufeza into enentsingiselo? Abantu abaninzi abayeki ukucinga lemibuzo ebalulekileyo. Bajonga emva kwiminyaka edlulileyo bamangaliswqe ukuba kutheni ubudlelwane babo bahlukene, kutheni beziva belambatha, nangona bekufanele ukuba bakuzuzile oko bebezimisele ukufezekisa. Omnye umdlali webhola edlalwa ngephini owafikelela phezulu kwi Holo yoDumo (Hall of Fame) wabuzwa ukuba yintoni anqwenela ukuba ange umntu umxelele ukuqala kwakhe ukudlala lomdlalo. Waphendula, "Ndinqwenela ukuba kukho umntu owandixelelayo ukuba xa ufikelela phezulu, akukho nto." Iinjongo ezininzi zibonakala zilambatha kakhule emva kokuchitha ixesha uzisukela.